Ahoana ny fananganana sy ny fanarahana ny fampiroboroboana Instagram na fampielezan-kevitra | Martech Zone
Ahoana ny fananganana sy ny fanarahana ny fampiroboroboana ny Instagram na fampielezan-kevitrao
Zoma, Aprily 17, 2015 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Miomana amin'ny taona faharoa izahay Fetibe mozika + teknolojia ary Instagram dia iray amin'ny toerana ampiroboroboantsika ny hetsika. Tsy mino aho fa manao asa tsara amin'ny Instagram toa izay azontsika atao isika, koa faly aho nahita ireo olona tao amin'ny ShortStack namoaka ity sary ity momba ny fomba fananganana sy fandrefesana ny valintenin'ny. Fampiroboroboana na fampielezan-kevitra Instagram.
Raha nanomboka nampiasa Instagram ny marika dia ny fanamby dia ny fampiasan'ny marika ny mombamomba azy ireo Instagram hampiroboroboana atiny isan-karazany, saingy rohy mivantana iray ihany no omena azy ireo hiara-miasa. Ny fetra dia midika hoe ny ankamaroan'ny marika dia manavao ny URL ao amin'ny bio-ny indraindray - indraindray isan'andro. Ity infographic ity dia manome vahaolana.
Miaraka amin'ny ShortStack, ny marika dia afaka mamorona Fanentanana Instagram izay afaka mampiantrano karazana atiny rehetra ao anatin'izany ny endrika, horonan-tsary ary maro hafa. Raha tokony hitarika ireo mpampiasa Instagram mankany amin'ny URL izay manana tanjona iray ianao dia ataovy izay hananana ilay rohy iray avela ao amin'ny bio-nao Instagram amin'ny alàlan'ny fitarihana azy ireo mankany fampielezan-kevitra Instagram mavitrika.
Manana tombony maro ny fampielezan-kevitra - ao anatin'izany ny fampidirana rohy manara-penitra, valiny azo refesina, fanatsarana ny finday, fandaharam-potoana, tsy misy fikojakojana sy fahatsorana amin'ny mpanorina ny fampielezan-kevitra ShortStack.
Tags: fampielezana ny instagramfampiroboroboana instagram
Mety ho fika manaraka ny dian'ny mpividy ve ny fikafika iray?